Tena afaka miaro tena tokoa amin’ny fitsabahana amin’ny fiainany manokana ve ireo mpampiasa “smartphones”? · Global Voices teny Malagasy
Tena afaka miaro tena tokoa amin'ny fitsabahana amin'ny fiainany manokana ve ireo mpampiasa “smartphones”?
Tsy mahafantatra akory ireo mpampiasa hoe manome angondrakitra marobe
Nandika (fr) i Sonia Belfiglio
Voadika ny 06 Jona 2021 9:15 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, Español, Português, Français, Ελληνικά, Swahili, русский, English, English
Gaël Duval, frantsay injeniera sady mpamorona ny /e/ Foundation. Sary nahazoana alàlana.
[Raha tsy misy fanambaràna mifanohitra, mankany amin'ny pejy amin'ny fiteny anglisy daholo ny rohy ato anaty lahatsoratra]
Ho an'ireo mpisehatra amin'ny aterineto sy ireo orinasa misahana ny teknôlôjia, ny fanangonana angondrakitra momba ireo mpampiasa no iray isan'ny loharanombolan-dry zareo. Nefa misy loza mitatao entin'io lasitra varotra iray io ho an'ireo mpampiasa, araka ny voaporofo amin'ireo tranga mateti-pitranga amin'ny fampiasàna izany ara-barotra amin'ny fomba miafina, ny fisian'ireo fiporitsahana goavana, ary ny fijirihana. Misy ve vahaolana iray azo antoka ho fanamafisana ny maha-tsiambaratelo ireo angondrakitra manokan'ireo mpampiasa tsirairay ?
Ifantohan'ireo orinasa toy ny Google sy Apple ny fanangonana isanandro ny angondrakitra momba ireo mpampiasa azy, indrindra fa amin'ny alàlan'ireo ‘smartphones’, ary mampivady ireo torohay avy amin'ireo fampiharana mandeha ao mandritra ny fotoana rehetra: ny olona ifandraisana sy ny fandaharam-potoanan'ilay mpampiasa, ohatra. Marobe ireo fampiharana mitsongo dia eo noho eo izay toerana alehan'ireo mpampiasa, raha ireo fampiharana momba ny fahasalamàna sy fanatanjahantena indray dia mitrandraka ireo torohay biômetrika. Angonina ary kirakiraina (hadihadiana) ireny angondrakitra ireny, mody lazaina fa mba hanolorana tolotra mifanaraka kokoa sy mifangidongidotra. Raha ny tena marina, ny ankamaroan'ireo mpampisa dia tsy tonga saina akory hoe manolotra torohay tsy hita noanoa ho an'ireo mpamatsy tolotra sy ireo tompon-tsehatra ry zareo.
Ireo mpikatroka mpiaro ny fiainana manokana, toa an'ilay Aotrisiàna Max Schrems, dia efa naneho ny ahiahiny lalina momba io lasitra io. Tsipihan-dry zareo ny mety hitomboan'ny fanitsakitsahana matetika ny fiainana manokana sy ny tsiambaratelo. Ny ohatra tsara indrindra angamba dia ilay tantara ratsin'ny Facebook, fantatra tamin'ny hoe raharaha Cambridge Analytica , ka tao anatin'izany ny orinasa britanika mpanohana ara-kevitra Cambridge Analytica dia nahazo, tsy nakàny fanekena akory, ny angondrakitr'ireo 87 tapitrisa mpampiasa Facebook mba “hanomezany fanohanana araka ny antontanisa ho an'i Ted Cruz sy Donald Trump tamin'ny 2016″.
Nambaran'i Schrems fa efa nampitandrina ireo solontenan'ny Facebook izy momba ireo fisintonana angondrakitra ataon'ny Cambridge Analytica, saingy tsy nahavita nandresy lahatra an-dry zareo mba hihetsika:
Nanambara tsy nihambahamba ry zareo [solontenan'ny Facebook] fa, amin'ny fomba fijerin-dry zareo, rehefa mampiasa ilay sehatra dia midika fa manaiky ny hametrahan'ny olona hafa fampiharana ao sy haka ny angondrakitra momba anao.
Saingy, rehefa dinihana, maninona ianao no hiasa saina amin'izay resaka fiainana manokana raha tsy manana zavatra ho afenina? Ilay mpanaitra, Edward Snowden, no namaly io fanontaniana io, tamin'ny 2015 nandritra ny resadresaka iray tao amin'ny Reddit :
Ny fitenenana hoe tsy miraharaha izay zon'ny sasany hanana ny fiainany manokana any ianao satria ianao tsy manana zavatra ho afenina dia mitovy amin'ny fitenenana hoe tsy misy iraharahianao izay fahalalahana maneho hevitra any satria ianao tsy manana zavatra holazaina.
Ireo tena loza mitatao mifamatotra amin'ny fampiasàna ireo sehatry ny teknôlôjian'ny fampahalalambaovao
Gaël Duval, injeniera amin'ny resaka rindrambaiko no sady manampahaizana manokana amin'ny angondrakitra, dia an-taona maro no tafiditra tao anatin'ny fandrafetana ireo rindrambaiko azo ampiasaina malalaka, ka anisan'ireny ny Mandrake Linux, rafitra fiasàna (mifototra amin'ny Linux) izay afaka ovaina sy averina tsinjaraina ara-dalàna mihitsy.
Avy eo izy nanapaka hevitra ny handrafitra rafitra fiasàna iray hanomezana fiarovana avo kokoa ny angondrakitr'ireo mpampiasa smartphones: ny /e/OS.
Nifandray taminy ny Global Voices mba hahafantarana ny fomba fanovàn'ny teknôlôjian'ny fifandraisana ny fiainantsika, ka mahatonga azy ho sady fahafahana manao zavatra, no loza mitatao ihany koa. Indro ny fomba fahitàny ny fivoaran'io karazana teknôlôjia io :
Fanontaniana filôzôfika be izany. Ho ahy manokana, mifangaroharo be ny fihetsehampoko momba io resaka io satria izaho dia liana mandrakariva amin'ny teknôlôjia. Nefa koa etsy andaniny, heveriko fa tafahoatra loatra indraindray, ary tena manina an'ireo fotoana fahiny aho izay tsy maintsy nandehanana nitady tranokely fiantsoana telefaona ianao vao afaka niantso. Tamin'izany no azo heverina fa fiainana tsy nankarary an-doha no sady [tsy mihazakaza-dava]. Mety ho gaga ihany ireo tanora mahafantatra fa hatreo amin'ny faha-dimy taona,tsy mba nanana telefaona na fahitalavitra aho tao an-tranonay. Izany no mahatonga ahy mahatsapa indraindray ho toy ny niaina ny ampahany tamin'ny fiainako tany anaty tontolo iray hafa mihitsy, tsy misy intsony ankehitriny. Tetsy ankilany, tena mahaliana be ny mahita ny zavatra azontsika atao amin'ny alàlan'ireo teknôlôjia maoderina, toy ny fanaovana antso mifankahita tava (lahatsary HD) amin'ilay olona ifampiresahana any amin'ny tendrontany iray any ambadika any, ary ny mahita ireo fiara rehetra mandeha herinaratra izay farafaharatsiny, tsy mandoro lasantsy ary ny havokavotsika [tsy fenoiny] amin'ny setroka avoakany.
Ankoatry ny fisarihana mampididoza entin'ny fahatsiarovana ny fahiny tao anatin'ny tontolon'ny analogique, dia atrehantsika ihany koa ny mety ho fiankinandoha tanteraka amin'ireo teknôlôjian'ny fampitambaovao – fanadihadiana iray natao tamin'ny 2018, teny anivon'ny ankizy, no manome ny fifandrohizan'ireo olan'ny fitondrantena sy ny fampiasàna tafahoatra ny smartphones : voaporofo fa izany dia niteraka ireo olana toy ny tsy fisian'ny fifantohana – trouble de déficit de l'attention (TDA) ho an'ny teny frantsay, ary ny rarintsaina. Fanadihadiana iray navoakan'ny Common Sense Media tamin'ny 2020 no nampibaribary fa 50% amin'ireo tanora tao amin'ny faritr'i Los Angeles no nahatsiaro fiankinandoha tamin'ny smartphone fampiasan-dry zareo [fr].
Tsy ela akory izay, ny loza mitatao ateraky ny fampiasantsika ireny teknôlôjia ireny dia ampahibemaso no naneken'ireo orinasa mpisehatra azy io tao anaty fanadihadiana iray tao amin'ny Netflix The Social Dilemma, izay nahitàna fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpiasa fahiny tamin'ireny orinasa goavan'ny nomerika ireny, indrindra fa ny Google,Twitter ary Facebook, nanazavàny ny fomba ninian-dry zareo natao, noho ny fikatsahana tombontsoa, mba hamahànana ny fiankinandohan'ireo mpampiasa.
Nihetsika ny governemanta sasany tamin'ny fanavaozany ny lalàna momba ny fiarovana ny angondrakitra, ka sady ho fanentanana ireo mpampiasa no ho fampiantsorohana andraikitra bebe kokoa an'ireo orinasa mivarotra teknôlôjia. Ny May 2018, nolanian'ny Fiombonambe Eorôpeàna ireo Fepetra ankapobeny momba ny fiarovana ny angondrakitra (RGPD) [fr]. Betsaka ireo fameperana natsofok'ilay lalàna ho an'ny fitantanana ny angondrakitra, toy ny fangatahana amin'ireo mpampiasa hanome alàlana tsy miolankolaka ho an'ny fampiasàna ny angondrakitra momba azy ireo sy fitakiana amin'ireo orinasa mba hamafa ireny angondrakitra ireny rehefa feno ny telo taona, tsy ilàna fifampiresahana. Efa tsinjoviny ihany koa ny amin'ireo sazy ara-bola goavana ho an'ireo izay tsy manaja ireny fepetra ireny Saingy ny fampiharana azy dia voafetran'ny tsy fahampian'ny fitaovana eo an-tànan'ireo manampahefana eo an-toerana, ary mazava loatra fa tsy afaka ampiharina izy ireny raha tsy any amin'ireo firenena mikambana ao anatin'ny Fiombonambe Eorôpeàna ihany.
Fitaovana iray hampaherezana ireo mpampiasa mba hanome fahefana misimisy kokoa an'ireo mpampiasa
Nandresy lahatra an'i Gaël Duval io toejavatra io mba hamoronana fitoavana iray ahafahan'ireo mpampiasa mandray ny fifehezana ny angondrakitra momba azy manokana:
Ny teny fanevanay dia ny hoe « ANAREO ny angondrakitrareo », satria antsika ny angondrakitra momba ny tenantsika manokana, ary ireo milaza mifanohitra amin'izany dia, na izy manohitra ny fahalalahana sy ny demaokrasia, na izy tompona orinasa mivelona amin'ny dokambarotra – satria ny angondrakitra manokan'ny olona dia afaka manampy amin'ny famarotana dokambarotra amin'ny vidiny lafo lavitra.
Toy izao no fiasan'ilay rafitra fiasàna noforoniny :
/e/ dia toy ny rohivoahary nomerika izay manome rafitra fiasàna ho an'ireo smartphone tsy mandefa ny angondrakitrao manokana [ho an'ny Google], toy ireo fikarohana ataonao, ny toerana misy anao… ary manaja ny tsiambaratelon'ny angondrakitr'ireo mpampiasa azy. Tsy manao fitsirihana / fikirana ny angondrakitr'ireo mpampiasa mihitsy na dia kely aza. Manome tolotra fototra ety anaty aterineto ihany koa izy, toy ny adiresy imailaka, habaka ho fanangonana, tetiandro, fitahirizana ireo fifandraisanao matetika, izay rehetra mifandray amin'ny rafitra fampiasan'ny smartphone.
Nambaran'i Gaël Duval fa rehefa angondrakitra manokan'ny olona no resahana, mifanaraka i Google sy Apple – mamahana ny lasitra ara-barotry ny Google ireny angondrakitra ireny, izay ny famarotana dokambarotra no tena ain-dehibeny, raha i Apple kosa mandritra izany fotoana izany, na milaza aza fa miaro ny fiainana manokan'ireo mpampiasa azy, dia mandray 8 hatramin'ny 12 lavitrisa dolara amerikàna isantaona eo ho eo ho takalon'ny fametrahana mialoha ny milina fikarohan'ny Google any anatin'ireo iPhones sy iPads.
Nampiany fa :
Rehefa eo ampototry ny iPhone ny mpampiasa iray, dia mandefa 6 Mo eo ho eo amin'ny angondrakitra momba azy manokana mankany amin'ny Google. Avo roa heny [io fatra io] ho an'ireo mpampiasa Android. Kanefa koa, vata mihidy ny fitaovana avy amin'ny Apple, tsy misy mangarahara na kely aza momba izay miseho ao anatiny ao. Tsy maintsy mametraka fitokisana amin-dry zareo ianao. Izahay kosa anefa etsy ankilany, manohana ny “fiainana manokana azo hamarinina” : misokatra ho an'ny daholobe ny loharano rehetra ao amin'ny /e/OS sy ilay rindrambaiko cloud (ny « fangaro sy fikarakaràna » ireo vokatra). Afaka jerena sy tsirihan'ireo manampahaizana manokana.
Anaty toejavatra iray mampitombo be ny fiankinandoha amin'ireo smartphones, mazava fa tsy ampy raha izay fanovana lalàna fiarovana mba ho fanentanana an'ireo mpampiasa, ka hanomezana azy ireo fitaovana sy ny fahalalàna ilaina mba hiarovana ny maha-tsiambaratelo ny angondrakitra momba azy ireo. Eo no mety hitàna anjara manandanja be ny fitaovana iray nomerika ahafahan'ireo mpampiasa ho lasa tomponandraikitra bebe kokoa sy manao dingana mialoha.